सम्हालिँदै श्वेता « News of Nepal
पति वियोगको लामो समयसम्म शोकमा रहेकी नायिका श्वेता खड्का सम्हालिएकी छिन्। नायक तथा निर्माता स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अल्पायुमै भएको निधबाट लामो समयसम्म शोकमा डुबेकी उनी सम्हालिँदै फेरि फिल्ममा फर्कंदै छिन्।
श्रीकृष्णको निधनपछि विछिप्त बनेकी उनी श्रीकृष्णसँग खेलेको फिल्म कोहिनुरपछि कुनै पनि फिल्ममा देखिएकी थिइनन्। त्यही फिल्म रिलिजमा रहँदा श्रीकृष्णको अचानक निधन भएको थियो। आफूलाई सम्हाल्दै श्वेता फिल्म निर्माणको तयारीमा जुटेकी छिन्। उनले कान्छी नामक फिल्म निर्माण गर्न लागेकी हुन्। यसबाट उनी नायिकाको रूपमा समेत फर्कंदै छिन्। फिल्ममा उनी शीर्ष भूमिका अर्थात् कान्छीकै रूपमा देखिनेछिन्। दर्शकले शोकमा डुबेकी श्वेता सिनेमामा फर्किउन् भन्ने धेरै अगाडिदेखि चाहिरहेका थिए। फिल्ममा श्वेता अभिनेता दयाहाङ राईका साथ देखिनेछिन्।
फिल्मलाई कोहिनुरका निर्देशक आकाश अधिकारीले नै निर्देशन गर्ने भएका छन्। वसन्त श्रेष्ठको नृत्य निर्देशन रहने फिल्ममा छायांक पुरुषोत्तम प्रधानको रहनेछ भने वैशाखबाट छायांकनमा जाने श्वेताले जानकारी गराइन्।
‘दर्शकहरुको मायाले गर्दा, उहाँहरुले दिएको मायाको गुण तिर्नका लागि फिल्म निर्माण गर्न लागेकी हुँु, श्वेता भन्छिन्– ‘सामाजिक कथावस्तुमा आधारित फिल्म भएको र फिल्मको कथालाई मिल्ने नाम भएकाले पहिले नै बनिसकेको फिल्मको नाम लिएर कान्छी बनाउन लागेको हुँ।’
फिल्म निर्माणको तयारीमा जुटे पनि हाल आफूले फिल्म निर्देशनको बारेमा नसोचेको उनी बताउँछिन्। ‘फिल्म निर्देशन गर्नुभनेको धेरै गाह्रो काम हो। मैले त्यस्को बारेमा सोचेको पनि छैन तर काम गर्दै जाँदा कन्फिडेन्ट बढ्यो भने पछि निर्देशन पनि गर्छु। अहिले नै चाहिँ फिल्म निर्देशनमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन।’
श्वेता फिल्म निर्माणसँगै आफ्ना नायक पति स्व. श्रीकृष्णको मार्ग पछ्याँदै सामाजिक कार्यमा पनि अगाडि बढ्दै छिन्। यस क्रममा केही दिनअघि श्रीकृष्णको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको ठूलो सिरुबारीस्थित भूकम्प प्रभावित झ्याडी गाउँमा रहेको माझीटोलमा गएर एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणको तयारी गरेकी छिन्। बस्ती निर्माणको नमुना तयार गरेर आवश्यक संरचना निर्माणमा सहयोग गर्ने वाचा गरेर आएकी उनले कुल ६५ घर निर्माणमा सहयोग गर्ने बताइन्। ‘केही समयअघि माझीगाउँको बारेमा एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ। त्यहाँको अवस्था निकै दयनीय रहेको सुनेर त्यो ठाउँको अवस्था कस्तो रहेछ हेर्न गएको थिएँ। तर, त्यहाँ मलाई बुहारी र भाउजु भन्दै निकै माया दर्शाउनुभयो’, उनले भनिन्– ‘उहाँ (श्रीकृष्ण) को जिल्ला भएकाले इमोसनल अट्याचमेन्ट त हुन्छ नै, तर मैले निर्माण गर्ने बस्ती र उहाँको गाउँ धेरै दूरीमा छ। म आफूले भ्यायसम्म सक्दो सहयोग गर्नेछु।’
भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले दिने रकमलाई नै लिएर एकैपटक नमुना बस्तीको रुपमा विकास गर्न लागिएको उक्त बस्तीमा नपुग रकम आफूलगायत अन्य विभिन्न व्यक्तिहरुले सहयोग गर्ने श्वेताले बताइन्। ‘बस्ती निर्माणपछि पनि सोलार जडान, शौचालय निर्माण जस्ता कामहरुमा हामी सहयोग गर्छौं। यसको संयोजक गाविस सचिव यज्ञराज कार्की हुनुहुन्छ भने अन्य विभिन्न व्यक्तिहरुले पनि सहयोगका लागि इन्ट्रेस्ट देखाइरहनुभएको छ। सबैको सहयोगमा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने सपना छ। यसका लागि प्राविधिक टोली पनि गइसक्नुभएको छ। अन्य काम पनि छिट्टै शुरु हुनेछ’ –उनले जानकारी गराइन्।